काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार मात्र पसल खोल्न पाइने, कुन बार कुन पसल खुल्छन् ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार मात्र पसल खोल्न पाइने, कुन बार कुन पसल खुल्छन् ?
काठमाडौं उपत्यकामा शर्तसहित केही खुकुलो बनाएर भदौ ३१ गतेसम्म लम्ब्याइएको निषेधाज्ञामा बार अनुसार व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका अनुसार सपिङ मल, फेन्सी स्टोर, कपडा पसल, जुत्ता पसल, कस्मेटिक पसलहरु साताको सोमबार बुधबार र शनिबार मात्र खोल्न पाइने भएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी भाँडा र भान्साजन्य साथै सोही प्रकृतिका अन्य पलसहरु साताको आइतबार, मंगलबार र शुक्रबार मात्र खोल्न पाइने भएको छ । यसै गरी फर्निचर, अटो मोबाइल सम्बन्धी पसलहरु साताको सोमबार र बुधबार मात्र खोल्न पाइनेछ ।
त्यसोत, फुटपाथ पसल, ठेला व्यापार, स्टेशनरी पसलहरु, इलेक्ट्रोनिक र इलेक्ट्रोनिक्स पसलहरु र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु विहान ११ बजेसम्म र बेलुकी ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरु स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाई विहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने पनि जनाइएको छ ।